Uma uthanda ama-superfoods futhi ngokuvamile uzama ukudla ngendlela efanele, kungenzeka ukuthi okungenani uzwile nge-spirulina. I-alga eluhlaza okwesibhakabhaka ekhulayo emanzini amasha. Kungabonakala ebusweni bechibini. Kubonakala sengathi akuyona into ekhangayo kakhulu, kodwa inzuzo enkulu kakhulu ukuthi akunakwenzeka ukuthi ungasebenzisi lo mkhiqizo. Njengamanye ama-algae, i-spirulina ikhula emhlabeni jikelele. Ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwayo kubonakala ngokuhlolwa okuningi kwesayensi. Kule minyaka engamashumi ayisikhombisa kutholakale ukuthi lokhu kuwumkhiqizo owusizo kakhulu futhi othembisayo, kodwa awukakasetshenziswa kabanzi. Umthunzi ongavamile we-algae unikezwa i-phytocyanin pigment. Ubuye achaze izinzuzo zezempilo, isibonelo, izinga eliphakeme lama-antioxidants. Ngakho le algae izuzisa kanjani impilo yakho? Ake sijwayelane nolwazi ngalolu daba kakhulu!
Umthombo wamandla anamandla
Ezweni lanamuhla, ngokuphila kwalo okunzima, kuyoba nzima ukuthola umuntu ongafuni amandla engeziwe - angakwazi ukunikeza i-spirulina. Ngenxa yokwakheka okucebile okuhlanganisa ne-B 1 , i-spirulina ingakwazi ukwandisa izinga lamandla ngokwemvelo. Uma usebenzisa i-spirulina nge-lame juice, ungasebenzisa ushukela oqukethwe emafenjini ukwandisa amandla. Hlanganisa ithisipuni le-algae powder nge-ingilazi yamanzi ahlanzekile - nje uhlanganise futhi ufake efomini yeqhwa, bese ufaka i-cocktails encane.
Ukuqiniswa kwempilo yengqondo
Ukuthatha ithisipuni yama-spirulina ngosuku kusiza ukuvikela ubuchopho ezifweni ezihlukahlukene, njenge-Parkinson noma i-Alzheimer's. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-spirulina, njengokudla okunezidakamizwa, ivikela ubuchopho kahle, ngoba inganciphisa ukuvuvukala nokunciphisa ama-radicals mahhala. Ucwaningo luye lwabonisa nokuthi i-spirulina ingasusa ingqondo - ukusetshenziswa kwansuku zonke kwandisa umkhiqizo futhi kuthuthukisa ikhono lokugxila.
Ukuhlanzwa kusuka ensimbi enzima
I-arsenic yokuphefumula isifo esibi kakhulu, ikakhulukazi emazweni asempumalanga, lapho amanzi aqukethe i-arsenic eningi. Umphumela walesi simo ubuhlungu, kubonakala ngisho neminyaka emva kokuvezwa. Ubuhlungu buhlotshaniswa nobuhlungu besisu, isifo sohudo esinzima, isicanucanu nokuhlanza. Uma usebenzisa i-spirulina ihlanganiswa ne-zinc, odokotela babona ukwehla kwezinga le-arsenic ngamaphesenti angamashumi ayisikhombisa ayisikhombisa. E-algae, okuningi kwe-chlorophyll, okusiza ukuhlanza igazi kusuka ebuchosheni, futhi kuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela.
Ukuqinisa amandla esisipha nokukhuthazela okwandayo
Ukhathala emisipha kubonakala ngenxa yezinqubo ze-oxidative. Ukusetshenziswa kokudla kwezitshalo ezicebile kuma-antioxidants kusiza ukuvimbela inkinga noma okungenani ukunciphisa okungenani. Ngaphezu kwalokho, kusungulwe ukuthi i-spirulina isisiza ukuba ibe namandla futhi iqhubeke njalo.
Ukunciphisa ingozi yomdlavuza
Abacwaningi babika ukuthi ukusetshenziswa kwe-spirulina kwandisa ukukhiqizwa kwama-antibodies, amaprotheni alwa nezifo futhi athuthukise ukuzivikela. Ucwaningo lwaseCzech lubonisa ukuthi i-spirulina nayo icebile ezintweni ezisebenza njenge-antioxidants ezinamandla. Ukukhiqizwa kwamangqamuzana omdlavuza kunciphise kakhulu uma usebenzisa i-spirulina. Ukwengeza lo mkhiqizo ekudleni kuzokusiza ukuvimbela ukuthuthukiswa kwamanqamu ahlukahlukene.
Ukunciphisa amazinga kashukela egazini
Ucwaningo lubonisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-spirulina kunciphisa amazinga kashukela egazini. Umphumela uhlaba umxhwele nakakhulu kunemithi ejwayelekile yesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, izilingo zomuntu zenziwa - iziguli ezingamashumi amabili nanhlanu ezine-type 2 yesifo sikashukela zazivame ukusebenzisa i-spirulina kanye nezinyanga ezimbili kamuva izinga leshukela legazi egazini labo lahle kakhulu.
Ukwehlisa umfutho wegazi
Ngenxa yokuguqulwa kwe-phytocyanin, i-spirulina ingavikela ngokucindezela kwegazi eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, i-spirulina isiza ukuvikela umzimba emzimbeni we-metabolic syndrome, okuyisinye sezimbangela ezivamile zezifo.
I-Spirulina nayo isiza ukwehlisa i-cholesterol egazini futhi ivimbele ukuqina kwe-atherosclerosis. Ezifundweni zika-2010, ukuhlolwa kwenziwa. Izinambuzane zondliwa ukudla nge-cholesterol ephakeme amasonto amane, bese-ke besebenzisa ukudla okufanayo, kodwa ngokufaka i-spirulina. Labo abathola i-1% ye-spirulina banesilinganiso se-26% se-cholesterol, futhi labo abane-spirulina engu-5% banciphisa okwe-41% kwe-cholesterol.
Ukunciphisa amathuba okuhlaselwa yinhliziyo
Ezifundweni ezifanayo ezikhulunywe ngenhla, kwatholakala ukuthi ukusetshenziswa kwe-spirulina kunciphisa indawo esondelene nayo ye-aorta - kukholelwa ukuthi ingavimbela ukuqina kwe-atherosclerosis nokuhlaselwa kwenhliziyo. Abacwaningi baqaphele ukuthi lezi zivivinyo zenziwa ezilwaneni ezinezidakamizwa ezicebile nge-cholesterol, okusho ukuthi ukusetshenziswa kwe-spirulina kungenza ngisho nokunciphisa umphumela wokudla okungenamsoco esimweni sempilo.
Ukulwa nezifo zesibindi
I-Spirulina ingadingeka kubantu abanezifo ezingelapheki zesibindi - izifundo zibonise ukuthi le algae ivikela ukulimala kwesifo se-cirrhosis nesibindi. Ososayensi bathole ukuthi lo mkhiqizo uwusizo kakhulu empilweni yebindi, ngaphezu kwalokho, usebenza njenge-antioxidant, ususe ama-radicals mahhala, uvimbela ukulimala kwesibindi nokunciphisa izinsimbi eziyingozi.
Ukukhuthazwa kwesisindo sokulahlekelwa
Ukusetshenziswa njalo kwamaprotheni kanye nokudla okunomsoco okunjenge-spirulina kuvusa ukulahlekelwa kwesisindo futhi kunciphise amanoni omzimba. Ukusebenzisa i-spirulina yezinyosi nsuku zonke nokulandela indlela yokuphila enempilo, ungakwazi ukusheshisa umzimba nokuthuthukisa imiphumela yokudla kwakho.
I-Spirulina ingasiza futhi ukulwa nezimpawu ze-PMS, njenge-colic, ukukhathala, ukuvuvukala nokuguquka kwemizwelo. Into esemqoka - ukuthatha i-spoonful spirulina nsuku zonke. Abesifazane abaningi bayaqaphela ukuthi izimpawu ziyanyamalala nhlobo, ezinye - ukuthi ziyawa.
Umthombo omuhle wamaprotheni
I-Spirulina iqukethe zonke i-amino acid ezidingekayo emzimbeni nasemaprotheni angu-65, okwenza kube yindlela ehle kakhulu yokudla inyama. Lona umkhiqizo omuhle wabalimi nezitshalo. Inkabi ngamaphesenti angamashumi amabili nambili iqukethe amaprotheni, kanye namalenti angamashumi amabili nesithupha, okusho ukuthi abakwazi ngisho ukufanisa ne-spirulina. Ukungahambi kahle kwe-algae kungaba yintengo, kodwa nje udinga ukuyihlanganisa ngemithombo yemifino engabizi kakhulu yamaprotheni ukuze uthole inhlanganisela engcono kakhulu.
Izifungi ngokwazo azibi - zikhona emgodini womlomo, i-digestive tract kanye nesifazane. Noma kunjalo, uma kungekho ukulinganisela okunempilo, izitho zomzimba ziyoba nezifo eziningi. Ukungalingani kwe-microflora kubangela izifo ezihlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, ukukhula kwefungi kuyimpawu yezifo ezizimele. Ukusetshenziswa njalo kwe-spirulina kungasiza ekubhekaneni nesibungulu nama-microbes.
Indlela yokusebenzisa i-spirulina?
Indlela elula yokusebenzisa i-spirulina ukuwufaka kokudla okuhlukile. Ungamane uhlanganise i-spoonful ye-powder engilazini yamanzi, kodwa kubantu abaningi ukunambitheka kubonakala kunamathele ngokwanele. Engeza i-powder kwi-cocktails yezithelo, ama-juice noma isobho, kanye nama-sauces. Lena yindlela enhle yokuthola okuhle ngaphandle kokubhekana nokunambitheka okungathandeki.
Ihhotela Blue Sea Ihhotela Nha Trang 2 * (Vietnam): izithombe kanye nokubuyekeza
Igama lesiGreki Iduna nensikazi. Ukubaluleka umsuka amagama Greek